Kudhawaad 100 ruux oo ku dhintay Dibadbaxyo ka socda Itoobiya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Kudhawaad 100 ruux oo ku dhintay Dibadbaxyo ka socda Itoobiya.
On Oct 26, 2019 472 0
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa ku waramaya iney wadankaas ka socdaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed, kaas oo wajahaya mucaarado xoogan.
Banaanbaxyada ugu ballaaran ayaa waxay ka dhacayaan gobollada ay degto qowmiyadda Oromada, oo uu ra’iisul wasaare nasab ahaan kasoo jeedo, waxaana meelaha lagu soo waramayaa iney gacmaha iskula tageen ciidamada police-ka iyo dadka banaanbaxyada dhigaya.
Taliyaha Police-ka maamulka Xabashida ugu magacaaban gobolka Oramada oo Warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday iney dhinteen ugu yaraan 67 ruux oo kamid ahaa dadka dhigayay banaanbayxada looga soo horjeedo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed.
Dadka ugu badan waxay ku dhinteen rasaas ay rideen ciidamada Amaanka oo isku dayaya iney ka hortagaan dadka dhigaya banaanbaxyada, waxaase jiro dad farakuturis ah oo ku dhintay muran iyo gacan ka hadal u dhexeeya dadka shacabka ah.
Banaanbaxyada socda ayaa maalintii Arbacada waxay kasoo billowdeen magaalada caasimadda ah ee Adis Ababa, ka gadaal markii dad careysan ay isugu soo baxeen wadooyinka, iyagoo gubaya taayeerada gawaarida.
Sida ay sheegayaan Warbaahinta qaar, banaanbaxyada ka dhacay magaalada Adis Ababa waxay yimaadeen kadib markii masuul katirsan Mucaaradka oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada uu baahiyay warar la xiriira iney Police-ku damacsanyihiin iney isaga qash qashaadaan.
Banaanbaxyadan waaweyn ee gacan ka hadalka wata, islamarkaana ka socda wadanka Itoobiya ayaa markale banaanka soo dhigaya mucaaradada xoogan ee uu wajahaya ra’iisul wasaaraha wadankaas ninka lagu magacaabo Abey Axmed.
Wadanka Itoobiya waxaa ku nool qowmiyado kala duwan oo ay kamid yihiin Oromada iyo Tigreega, waxaana mid weliba ay dooneysaa iney awooda iyo maamulka ay gacanta ku dhigto.
Qowmiyada Oromada oo ah qowmiyad muslim ah ayaa sanadihii lasoo dhaafey wajaheysay dhibaatooyin adag oo uga imaanayay maamulka talada hayay, illaa iyo hadana waxaa lagu tiriyaa qowmiyadan kuwa ugu badan ee la kulmaya tacadiga ciidamada Amaanka.